देश नै नरहे
बिटु केसी बराल, (ह्युस्टन, टेक्सस)
देश नै नरहे के होला नेताहरुको गति,
आफुले खनेको खाल्डोमा आफै पुरिने मति,
आफैमात्र पुरिए त हुन्थ्यो नि !
घचेडिने भए सारा जनता जति !!
हे ! जनता चुपचाप हेरिरहन्छौ कति ?
बेला यै हो, देखाउ अब तिम्रो शक्ति !!
जलिरहेको छ देश, दन्दन बलिरहेको छ !
बन्दै, बन्दमा अचम्म ! लाग्छ,
कसरी देश चलिरहेको छ ?
तिमी नै भन -
कुन चाहिं दलले चितायो देशको भलो ?
हाम्रो प्यारो देश नेपाल
कति फुल्यो, कति फल्यो ?
ईतिहास साक्षी छ -
जब जब संकट पर्छ देशमा,
आखिरमा काँध थाप्ने
राजा होइन, तिमी जनता नै हो
हे ! जनता चुपचाप हेरिरहन्छौ कति